साली भित्र्याउन श्रीमतीसँग दोस्रो बिहे ! – " सुलभ खबर "
साली भित्र्याउन श्रीमतीसँग दोस्रो बिहे !
अधिकाशं मानिसले जीवनकालमा एक पटक मात्र विवाह गर्दछन् यदि जीवन साथीसँगको खटपट वा अन्य कारणले केहिले अर्को विवाह हुनेगर्छ । तर कोहि ब्यक्तिले एकै पटक दुई महिलासँग विवाह गर्न सक्ला ? त्यो पनि आफ्नो पत्नी र सालीसँग भारतको मध्यप्रदेशस्थित भिन्ड जिल्लाको गुदावली गाउँका एक सरपञ्च (मुखिया)ले सालीसँग बिहे गरे । अनौठो त त्यहाँ भयो उनले साली भित्र्याउँदा आफ्नी श्रीमतीसँग दोस्रो बिहे गरे । त्यो पनि एकै मण्डपमा ।
यसरी एकै मण्डपमा आफ्नी पत्नी र सालीसँग बिहे गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ गुदावलीका सरपञ्च ३५ बर्षीय दिलीप परिहारले ९ बर्ष अघि विनितादेवीसँग विवाह गरेका थिए । अहिले विनितादेवी २८ बर्षकी भइन् र उनीबाट ३ सन्तान पनि भए ।
बिनिता एकाएक बिरामी भएपछि उनले घरमा फेरी साली भित्र्याउने तयारी गरे । अनि उनले बिनिताकै मामाकी छोरी २२ वर्षीया रचनालाई दोस्री दुलही बनाउने योजना बनाए त्यही बिहेको मण्डपमा रचनालाई स्वयम्बरको माला पहिराएपछि फेरि दिलीपले पहिली पत्नी बिनितालाई पनि स्वयम्बरमाला पहिराए ।
सार्वजनिक भिडियोमा विवाह अघि दुबै दिदिबहिनी बेहुलीको पहिरनमा वरमाला लगाएर दिलीपको दायाँबायाँ आउछन् र दिलिपले पालैपालो दुबैलाई माला लगाएर विवाह गरेको देखिन्छ ।
कानूनी र धार्मिक मान्यता अनुसार दोस्रो बिहे गर्न नमिलेपनि अहिलेसम्म दिलिपविरुद्ध उजुरी परेको छैन् । उजुरी परे कारबाही प्रक्रिया अघिबढ्ने स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
यता विवाहको भिडियो सार्वजनिक भएपछि दिलीपलाई यस बिषयमा धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जसमा उनले आफ्नो पहिलो पत्नी बिनितिदेवीको स्वास्थ्य खराब भएकाले सन्तानको रेखदेखका लागी साली रचनासंग विवाह गरेको बताएका छन् आफ्नो दोस्रो विवाहका लागि पहिली श्रीमतीको अनुमति लिएको पनि उनले बताएका छन् ।